Puntland: Xildhibaano ka hadlay Colaadda Sool
GAROOWE, Puntland- Labo kamid ah Xildhibaanada Barlamanka Puntland ee ka soo jeeda gobolka Sool, ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Garoowe, waxay uga hadleen xaaladda kacsan ee gobolkaas gaar ahaan, dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee ka socda deegaanka Tukaraq.
Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee Barlamanka Puntland, Xuseen Xaaji Diiriye iyo Guddoomiyaha guddiga Amniga Saadiq Abshir Garaad, ayaa shir saxaafadeedkooda ku sheegay inay kasoo hor jeedaa daandaansiga ay Somaliland ka wado qaybo kamid ah dhulka Puntland, iyagoo tilmaamay inay diyaar u yihiin difaaca dhulkooda.
Diiriye oo hadalka ku horeeyay ayaa Somaliland ku eedeeyay inay daan-daansi qaawan dhulka Puntland ku hayso tan iyo 2004-tii, wuxuuna sheegay inaan wada-xaajood dambe laga gali doonin xaaladda maanta taagan oo uu xusay inay halkaan soo gaarsiisay dulqaadka iyo nabad jacaylka Puntland.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu fariin u diray Guddoomiyaha Barlamanka Somaliland oo uu sheegay inuusan waxbo ka ahayn halka uu ka hadlayo, isagoo ugu goodiyay inay ka abaal marin doonaan wuxuu ku hadlay.
Mudanahan ayaa sidoo kale baaq qaylo dhaan ah u diray beesha uu kasoo jeedo, isagoo ka codsaday inay iska qaadaan cadowga dul fadhiya islamarkaana xoreeyaan dhulkooda, wuxuuna tusaale ugu soo qaatay degmada Buuhoodle.
Isagoo sii hadlaya wuxuu Somaliland ku tilmaamay maamul bur-buriyay sidoo kale kala qaybiyay dadka ku nool gobolka Sool.
Dhinaca kale Xildhibaan Saadiq Garaad, ayaa Somaliland ku eedeeyay inay ka been sheegtay xuduudii Ingiriisku u xadeeyay, taasoo uu tilmaamay inay tahay xadka u dhaxeeya Sool iyo Togdheer. Wuxuu sheegay in xadka Somaliland uu yahay halka loo yaqaano Libida Gaatama uuna 10km galbeed ka xigo tuulada Karin.
Hadalkan oo u muuqday mid soo daahay ayaa kusoo beegmay xilli mudanayaashan waqti dheer kamid ahaa golaha Barlamanka Puntland, aysan waxbo ka qaban dhibaatooyinka soo noq-noqday ee ka taagan gobolka Sool.
RW Khayre iyo Senator Farole oo Garowe ku kulmay [Sawirro+Muuqaal]
Puntland 01.08.2018. 17:55
Ra’isal wasaaraha dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre...
Gaas: Labo Boqol oo kun ayaan gaarsiin doonaa degmada Taleex
Puntland 19.12.2017. 14:26
Puntland 10.01.2018. 19:12
Puntland: Xubno dowladda mucaaraday oo Garoowe lagu xiray
Soomaliya 13.10.2017. 14:32
Baarlamaanka Puntland oo ka hadlay doorashada Somaliland [Daawo]
Puntland 07.11.2017. 18:59
Barlamanka Puntland oo xasaanad siiyay Afar Wasiir
Puntland 19.11.2017. 15:42
Turkiga oo shaaciyay kaalintiisa wadahadalada DF iyo Somaliland 24.01.2019. 15:38
Wafdi gaarey Garowe iyo Caleema-saarka Deni oo isha lagu wada hayo 24.01.2019. 12:41
Xiisad siyaasadeed oo ka taagan Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya 24.01.2019. 12:11
Amiirka Qadar oo la kulmay Wasiirka difaaca Somalia [Maxay kawada hadleen?] 24.01.2019. 12:01
Xisbiga Waddani oo mowqif cad ka qaatey mudo kordhinta doorashadda Somaliland 24.01.2019. 10:26